Fomba Fitaizan-tSinoa Maka Tahaka ny ‘Tigra’ Miteraka Fitarainana Avy Amin’ny Tanora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2014 22:28 GMT
Mazàna ny fomba fitaizan'ny ray aman-dreny Shinoa no voafaritra ho “diso mifehy loatra”. Io fomba fitaiza io ihany koa, izay tondroina ho toy ny “fitaizan'ny tigra”, dia nahasarika manokana ny saina hatramin'ny nivoahan'ny boky “Nahoana No Avo Toerana Ny Reny Shinoa” tamin'ny 2011
Vao haingana, ny alahelon'ny tovolahy iray vao avy nahazo ny diplaomany noteren'ny ray aman-dreniny handà asa iray dia nanakoako teny anivon'ireo andian-taranaka tanora ety anaty aterineto ao Shina, izay mifampizara ny sorisorin-dry zareo momba ny fomba fisaina efa lany andron'ireo ray aman-dreny sy ny fomba fitaiza diso henjana loatra miainga amin'ny lafiny fanabeazana ka hatrany amin'ny fialamboly sy ny asa ary ny fanambadiana.
Nahazo diplaoma avy amin'ny anjerimanontolo, i Wang Xiao dia noterena hamotsotra asa iray mahavelona hitany taorian'ny nahazoany ny diplaoma noho ny fiheveran'ireo ray aman-dreniny fa tsy ao anaty ‘rafitra’ io asa io, midika hoe orinasa tsy isan'ireo an'ny fanjakana na mifandray amin'ny governemanta, noho izany dia tsy azo antoka ny fahamarinan-toerany. Toy ny ankabeazan'ireo ray aman-dreny Shinoa tamin'ny taona 1950 sy 60 izay niaina ny fotoan-tsarotra indrindra teo amin'ny tantara Shinoa, dia tena mbola manan-danja amin-dry zareo ny resaka fahamarinan-toeran'ny asa sy ara-tsosialy miohatra amin-javatra hafa.
Kanefa, ireo andian-taranaka teraka taorian'ny 1985 dia manana fomba fisainana tena hafa tanteraka, mahatonga fifandirana eo amin'ireo ray aman-dreny sy ny zanany. Ohatra, tany am-piandohan'ity volana ity, vitan'ny reny Shinoa iray ny nividy pejin-dokambarora iray manontolo tao amin'ny gazety Shinoa Melbourne mpiseho isanandro, mba hiangaviana ny zanany lahy hody an-trano hankalaza ny Taona Vaovao taorian'ny andrana maro niverimberina nataony mba hanerena ity zanany hanambady ka nampahatahotra ity farany nahatonga azy nandositra.
Niparitaka be tao amin'ny Sina Weibo, tranonkala malaza be fitorahana bilaogy kiritika, ny tantaran'i Wang Xiao, ary nanjary lasa ho ny lohahevitra noresahana be indrindra tamin'ny 24 Janoary 2014. Maro no nitaraina tety anaty aterineto momba ny tsy fahampian'ny fifankahazoana sy ny fifehezana diso tafahoatra ataon'ny ray aman-drenin'izy ireo.
Nanadihady ny fiovàn'ny fitondrantena manoloana ny resaka asa fitadiavana eo amin'ireo andian-taranaka roa ireo i “Alpaca” :
Tontolo ara-tsosialy maro samihafa no nitondra ho amin'ny hevitra maro samihafa momba ny asa fitadiavana. Tamin'ny andron'ny raintsika, ny tena nifantohana dia ny sakafo sy ny fitafiana, noho izany dia loharanom-bola azo antoka ny “loviam-bary vita vy”. Ho an'ireo nahazo diplaoma amin'izao fotoana izao, tsy dia ny sakafo sy ny fitafiana intsony no laharam-pahamehana; ho azy ireo, midika fikatsahana ny lafatra sy filàna ara-panahy ihany koa ny resaka asa.
“shishang zuidade xingfu shianjing” mpiserasera ety anaty aterineto no namintina ny fomba miavaka fitaizan'ny sinoa :
1. fampihantàna zaza, 2. herisetra ara-panahy mampikatso ny fitomboan'ny maha-izy ny tena hanana fahaleovantena , 3. famporisihana ny ara-pitaovana fotsiny, 4. sazy ara-batana, 5. fiovàna ara-tsaina tsy mitsahatra, 6. ny ray aman-dreny no tena vahiny ara-panahy eo anatrehan'ny zanany, 7. lasa fitaovan'ireo ray aman-dreny ny zanany ho entiny manatanteraka ireo nofinofy tsy tanterak'izy ireo, 8. tsy fahampian'ny fanabeazana ara-moraly, 9. be loatra ny resaka materialisma, 10. tsy fahampian'ny fanabeazana ara-pananahana lasa sakana ho an'ny fitomboan'ny ankizy.
“Xinyan zewuyan” nanoratra hoe :
Shinoa iray hafa mpanoratra no sady bilaogera i Hanhan no nitanisa ny hoe :
Betsaka ny ray aman-dreny no tsy mamela ny zanak'izy ireo handeha hamonjy fotoana. Na dia mandritry ny fotoana maha any amin'ny kolejy aza, betsaka ny ray aman-dreny no misakana izany, saingy vantany vao mahazo diplaoma ianao, fanirian'ny ray aman-dreny rehetra ny hahita an-janany mifanao fotoana amin-tsipa sy hanambady avy hatrany, manan-trano ny olona iray mahay ny zavatra rehetra ary mendrika. Ndryy mahafinaritra ery.
Ontsa i “Que” ：
Efa nahazatra ny ray aman-dreny ny fiheverana ny hitsabaka amin'ny fiainan'ny zanany, ny fianarany, asa, ary na ny fanambadiany aza. Tsy mba vakian-dry zareo velively izay mba ao an-tsain'ny zanany, na hajainy izay fanapahan-kevitry ny ankizy, heverin-dry zareo hatrany fa afaka mibahan-toerana amin'ny zavatra rehetra ry zareo raha vao resaka mikasika ny zanany. Mampalahelo, io karazam-pisainana io dia mbola hifandovàn'ireo taranaka hifandimby.
Mpampiasa iray hafa no nanindry mafy ny toetra mamoa-doza omen'ny ankamaron'ny ray aman-dreny Shinoa lanja manoloana ny zanany :
Ny tena “tombony” ratsy indrindra azon'ny ankizy Shinoa dia ny fanekena be fahatany, fihainoana ray aman-dreny rehefa any an-tsekoly, any am-piasàna, rehefa manambady. Ny fiderana ambony indrindra ny ray aman-dreny dia hoe “manaraka ny teniny ny zaza itsy sy iroa. “Raha lasa ireo ray aman-dreny, iza indray no hohenoina eo? Ny “Manaiky be fahatany” dia mbola mahatahotra kokoa noho ny fanompoana
Mpisera iray ety anaty aterineto no nahita fanantenana ao anatin'izao andian-taranaka tanora izao :
Sarotra angamba ny hanova ny fomba fisainan'ireo ray aman-drenintsika noho ny zavatra niainan'izy ireo, nefa antenaina fa indray andro any rehefa mba lasa ray aman-dreny isika, hosorohantsika ny hadisoana tahaka izany ary dia mba hisitraka fahalalahana sy fizakantena misimisy kokoa ny zanatsika